I-MobileMapper 6 vs. Juno SC – Geofumed
Ikhaya/cadastre/MobileMapper 6 vrs. Juno SC
Ndibaxelele lonto Ndiyavavanya I-MobileMapper 6, kule veki siya kwenza iimvavanyo zentsimi, kodwa ukufunda kwi-Intanethi ndafumanisa ukuba ekuqaleni kwalo nyaka inqaku labhalwa ngokusekelwe kuvavanyo lokuthelekisa ezi zixhobo zimbini, apha ndiya kubonisa eyona nto ibalulekileyo kolu thelekiso. unokukhuphela Gqiba kweli phepha.
Idatha ye-MobileMapper ye-6 yaqokelelwa kusetyenziswa i-Magellan Mobile Mapping, kunye nenketho ye-post-processing, emva koko ilungiswe nge-MobileMapper Office.
Idatha ye-Trimble Juno yaqokelelwa kusetyenziswa i-ArcPad 7.1 kunye ne-Trimble GPS echanekileyo yokwandiswa, emva koko idatha eluhlaza yalungiswa nge-ArcMap 9.3 kunye ne-Trimble GPS Analyst extension.
Zombini izixhobo zifakwe kwipali, ukuze kuthathwe idatha kwiimeko kunye nexesha elifanayo. Umsebenzi wenziwa ngokulinganisa i-cul-de-sac, ukuqala ukuyilinganisa ngeProMark 500 ye-1 centimeter echanekileyo ukuze ube nayo njengereferensi kwaye kunye nezixhobo ezibini ezivavanywayo.
Le grafu ilandelayo ibonisa idatha efunyenweyo, ngaphambi nasemva kokulungiswa. Imigca ephuzi ihambelana ne-Trimble (iikhenkethi ezintlanu), eziluhlaza okwesibhakabhaka kwiMagellan; bona ukuba emva kohlengahlengiso, ukubanjwa kwe-MobileMapper kuphantse kube ngumgca ofanayo.
Kulo mfanekiso ulandelayo yidatha ethelekisayo (esele igqityiwe emva), jonga indlela i-Trimble ineengxaki ezinzulu ngayo xa ibamba amanqaku kwiikona ezimbini, phantsi kwesakhiwo esiphazamisayo, xa kuthelekiswa neMagellan.
Lo ngumbono nje, ngoku makhe sibone ukuba kwenzeka ntoni xa siyithelekisa nemilinganiselo yokwenyani kwitheyibhile. Iitheyibhile ezizimeleyo zivela kuxwebhu ngolu hlobo lulandelayo, kodwa ngeenjongo zethu ndizidibanise nenkqubo entsonkothileyo ebizwa ngokuba yi-MS Paint.
Njengoko ubona, yonke imilinganiselo ye-Magellan (eblue) ibonisa ukuchaneka kwe-submeter, kunye ne-0.70 kakhulu, kunye ne-avareji ye-0.50. Ngelixa ezo zeJuno (ezimthubi) zivela kwi-0.40 ukuya kwi-5.30 kwaye i-avareji yayo yi-1.90.
Kubonakala ngathi itekhnoloji ye-BLADE ephunyezwe nguMagellan yenza esi sixhobo sivelise iziphumo ezichaneke ngokufanayo naleyo yenziwa ngumanduleli wayo owaziwa ngokuba yiMobileMapper Pro, ezinye iingenelo ezingakumbi kwaye ngaphezu kwako konke, ngexabiso elingenakoyiswa ukuba ucinga ukuba libonelela ngokuchaneka kwe-sub-metric.
Owu, ngobulumko bexabiso, nalu uthelekiso, kumaxabiso ase-US, ngoMatshi ka-2009, kuquka nesoftware esetyenzisiweyo.
Emva kokwenziwa kokhetho
Juno SC Umamkeli
Isoftware yeESRI ArcPad
Ulwandiso oluchanekileyo lweGPS
Ukwandiswa koHlalutyi lweGPS lwe-ESRI ArcGIS $1,995
Apha ungabona uxwebhu olupheleleyo, apho iimeko ezingaphezulu zokubanjwa, ulungiso kunye nokuchaneka kwiimeko ezinqabileyo zokwamkelwa zichazwe.
eCADLite: Enye indlela eya kwi-Microstation
Molo, ikhonkco lokukhuphela uxwebhu alisebenzi 🙁
EGuatemala, inkampani iGeomatyca isasaza iAshtech, iMagellan kunye neemveliso zeTopcom. Ikwizowuni ye-12, eColonia Santa Elisa.
Ungaqhagamshelana nabo kule nombolo +502 2476 0061
Ndihlala eGuatemala, ndinomdla kwiMM6, ndingayifumana phi.
Molo Pedro, unokuyikhuphela apha:
Usuku oluhle galvarezhn.
Ndingathanda ukwazi ukuba kwenzeka ukuba unayo i-MobilMapper Cx manual, kwaye izolo bandiboleke enye, kodwa ngokunyanisekileyo andazi ukuba ndingayisebenzisa njani kwaye ndisebenzise izibonelelo zayo kuba andizange ndibe nesinye sezi zixhobo ezandleni zam. Ngaphandle koko, ndiyabona ukuba ukuchaneka kwe-submetric kunokufezekiswa kwi-post-processing, kodwa andazi ukuba ndingasebenza njani nayo.
Ungandinceda ngokundixelela ukuba ndingasifumana phi isifundo malunga nayo?
Att. nguPedro Silvestre
Ibhlog entle kakhulu, inqaku ligqibelele. Ndilinde ukuvavanya izixhobo. Ndithenge iperi kwaye ndilinde ukuhanjiswa. Iza kunye ne-antenna yangaphandle kunye ne-post-processing, ngoko ke ndicinga ukuba ndingafumana malunga ne-30 cm. misa kwaye uhambe. Ukusebenza kunye nePromark 2 esebenza njengesiseko. Xa sineziphumo, sigqabaza ngazo.